တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကဏ္ဍတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုစီမံကိန်း ၁၉၂ ခု လက်မှတ်ရေးထိုး - Xinhua News Agency
ချုံချင့်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကဏ္ဍမူဘောင်အတွင်း အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇.၁၆ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိသော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုစီမံကိန်း ၁၉၂ ခု အား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း တရားဝင်အချက်အလက်များအရ သိရသည်။တရုတ်-စင်ကာပူ (ချုံချင့်) မဟာဗျူဟာမြောက် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု သရုပ်ပြဇုန်သည် နယ်ပယ်စုံတွင် ရှေ့ပြေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဏ္ဍအောက်ရှိ သဘောတူညီချက်များသည် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ထောက်ပံ့သယ်ပို့လုပ်ငန်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာလုပ်ငန်း စသည့် ကဏ္ဍလေးခု၌ အဓိက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မကုန်မီ စီချွမ်းနှင့် ဆန်ရှီး ပြည်နယ်များ အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ ပြည်နယ်အဆင့်ဒေသ ၉ ခုတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုစီမံကိန်းများမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅.၅ ဘီလီယံကျော် ရရှိခဲ့သည်။
၎င်းစီမံကိန်းများတွင် နိုင်ငံတကာစီးပွားလုပ်ငန်းချေးငွေများ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အာမခံစာချုပ်နှင့် အိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ယုံကြည်အပ်နှံစာချုပ်များအပြင် ထုတ်လုပ်မှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှထောက်ပံ့သယ်ပို့လုပ်ငန်းများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ ပါဝင်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကိုက်ညီလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံပိုင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Temasek ကလည်း ဘဏ္ဍာရေးနယ်ပယ် အထူးသဖြင့် ငွေကြေးနည်းပညာနှင့် ဆက်စပ်သော နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ချုံချင့်မြို့ရှိ ဆက်စပ်သောစီးပွားရေးများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#China, #Singapore, #Connectivity, #Cross_Border, #Project, #Xinhua, #Myanmar, #XinhuaMyanmar, #တရုတ်, #စင်ကာပူ, #ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု, #နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်, #စီမံကိန်း, #ဆင်ဟွာ
CHONGQING, Oct. 13 (Xinhua) — A total of 192 cross-border financing projects worth 17.16 billion U.S. dollars have been inked within the framework ofaChina-Singapore connectivity initiative as of Tuesday, according to official data.
The China-Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative on Strategic Connectivity aims to conduct pilot cooperation in various fields. The agreements under the initiative mainly fall into four categories: financial services, air transportation, logistics, and information and communications technologies.
By the end of 2020, nine provincial-level regions in west China including Sichuan Province and Shaanxi Province had raised over 5.5 billion U.S. dollars from the cross-border financing projects.
The projects include international commercial loans, cross-border bond issuance and real estate investment trusts, among others, covering manufacturing, medical care, logistics, tourism and other industries, broadly meeting the diversified cross-border financing needs of enterprises in western China.
Singaporean state investment company Temasek said that its portfolio company will discuss cooperation with relevant enterprises in Chongqing in the financial field, especially in the field of financial technology and related cross-border business. Enditem
Photo taken on Aug. 6, 2020 showsaview of southwest China’s Chongqing. (Xinhua/Liu Chan)